मृतकलाई श्रद्धाञ्जली दिँदा किन हाँसे उपेन्द्र यादव ? « Pahilo News
मृतकलाई श्रद्धाञ्जली दिँदा किन हाँसे उपेन्द्र यादव ?
प्रकाशित मिति : 12 March, 2017 9:39 am
२९ फागुन । सप्तरी घटनामा मारिएका पाँच जना व्यक्तिका परिवारजनको आँखा अझै ओभानो भइसकेको छैन । मृतकहरुका परिवारमा शोक व्याप्त छ । तर, सप्तरी घटनामा मारिएकाहरुको परिवारमा खुसी खोसिएका बेला तिनै मृतकहरुको शवयात्रामा सामेल एक जना मधेसी नेताले भने हातमा फूलको माला लिएर हाँसिरहेको तस्बिर भने अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ ।
ती नेता हुन्, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । उनी मधेसी मोर्चाका अरु नेतासँगै शनिबारको शवयात्रामा भाग लिन राजविराज पुगेका थिए । मृतकहरु सञ्जन मेहता, पिताम्बर मण्डल, वीरेन्द्र महतो, आनन्द साह र इनरदेव यादवको शवलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि स्थानीय गजेन्द्रनारायण चोकमा राखिएको थियो । त्यसपछि मृतकहरुका शवलाई राजविराज, हनुमाननगर, भारदह, कञ्चनपुर, रुपनी, कल्याणपुर, कदमाहा, लहान हुँदै पुनः राजविराज पु¥याइएको थियो ।
उक्त शवयात्राका क्रममा सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने गम्भीर देखिएका थिए । तर, यादव भने हातमा फूलको माला लिएर हाँसिरहेका थिए । उनीभन्दा पछाडि उभिएका एक जना नेता पनि मुस्कुराइरहेका थिए । यादव हाँसिरहेको तस्बिर आइतबार प्रकाशित ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा छापिएको छ । जसलाई क्यामरामा कैद गर्न भ्याएका थिए, माला कर्णले ।